ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးကိုဘယ်လမ်းမှာအသုံးပြုသလဲ။ Thinning Shears - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဇွန်အိုး ဇြန္လ 09, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 1
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှရရှိသောမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ“ ကျွန်ုပ်ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်” ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးတိုကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းကိုဘေးတွင်ကိုင်ထားပါကသင်သည်လက်ယာဖြစ်စေ၊ လက်ဝဲသော်လည်းကောင်း၊ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးသည်အပြင်ဘက်သို့ ဦး လှည့်သင့်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးသည်အတွင်းပိုင်းကိုရင်ဆိုင်သင့်သည်
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတစ်စုံစီသည်ဆံပင်ကိုပါးနပ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့အားမှားယွင်းသောလမ်းတွင်တွေ့ပါကဆံပင်ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာပိုမိုဖတ်ပါ ဒီမှာဆံပင် thinning ကတ်ကြေး! ဒါမှမဟုတ်ရှာပါ အကောင်းဆုံးပါးလွှာသောညှပ်လမ်းညွှန် ၅ ခု ဒီမှာ!
ဇွန်အိုး ဇြန္လ 10, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 10